Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Lambar 60 - Awdinle Online
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka Lambar 60
May 14, 2020(Awdinle Online) –Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada AMISOM ku leeyahiin deegaanka Lambar 60.
Inkastoo aan la ogeyn khasaaraha uu geystay dagaalka, hadana waxaa lasoo sheegayaa in labada dhinac ay halkaas ku dagaalamayeen in ku dhaw saacad.
Dadka deegaanka oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha maxaliga ee Muqdisho ayaa sheegay iney si xoog leh u maqlayeen dhawaqa rasaasta kooxaha dagallamay, balse aysan jirin cid xaqiijin karta khasaaraha kala gaaray.
Weerarka Al-Shabaab ayaa kusoo aadaya xilli taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sheegteen iney halwgallo ay ku fuliyeen Shabeelada Hoose ay ku dileen saraakiil sare oo ka tirsan Shabaab.
Labada dhinac ayaan wali ka hadlin dagaalka la sheegay inuu maanta ku dhexmaray deegaanka lambar 60.
Dagaalka Ciidamada AMISOM iyo Al-Shababa ku dhex-maray deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Taliska Ciidanka xoogga dalka ay sheegeen in howlgal laga fuliyay inta u dhaxeysa deegaanka Janaale iyo degmada Qoryooley ay ku dileen saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab.
Previous articleJubbaland oo sheegtay inay ka feejigan tahay weerarada Al-Shabaab
Next articleDuqeyn ka Dhacday Gobolka Jubada Dhexe.